I-china Cryogenic medium size liquid oxygen oxygen plant Liquid Nitrogen Plant abakhiqizi nabaphakeli | NOMA
Isitshalo se-Cryogenic medium size liquid oxygen oxygen Plant Liquid Nitrogen Plant
Umklamo womqondo walesi sitshalo ususelwa endaweni ehlukahlukene yokubilisa yegesi ngayinye esemoyeni. Umoya uyacindezelwa, upholile futhi ususwe i-H2O ne-CO2, bese uzopholiswa esitshalweni esikhulu sokushisa uze ukhishwe. Ngemuva kokulungiswa, i-oxygen yokukhiqiza ne-nitrogen ingaqoqwa.
Lesi sitshalo senzelwe ukuhlanzwa kwe-MS ngenqubo yokukhulisa i-turbine expander. Kuyisitshalo esijwayelekile sokuhlukaniswa komoya, esisebenzisa ukugcwaliswa okuphelele kwezinto nokulungiswa kokwenza i-argon.
Umoya ongahluziwe uya kusihlungi somoya ukuze ususe uthuli nokungcola kwemishini bese ungena ku-air turbine compressor lapho umoya ucindezelwa ku-0.59MPaA. Ngemuva kwalokho ingena ohlelweni lokupholisa umoya, lapho umoya opholile ufike ku-17 ℃. Ngemuva kwalokho, igelezela ku-2 yamangqamuzana ngesihlungo se-adsorbing tank, egijima nayo, ukuze isuswe i-H2O, i-CO2 ne-C2H2.
Ngemuva kokuhlanzwa, umoya uxubana nomoya owandayo ofudumeza. Ngemuva kwalokho icindezelwa ngumcindezeli ophakathi nendawo ohlukaniswa waba yimifudlana engu-2. Ingxenye eyodwa iya kusishintshisi esikhulu sokushisa ukuze ipholile iye ku-260K, bese imunca kusuka engxenyeni ephakathi nendawo yokushisa okukhulu ukufaka i-turbine yokwandisa. Umoya onwetshiwe ubuyela kusishintshisi esikhulu sokushisa ukuze uvuselelwe, ngemuva kwalokho, ugelezela emoyeni okwandisa i-compressor. Enye ingxenye yomoya ikhuliswa ukukhuphuka kwezinga lokushisa okuphezulu, ngemuva kokupholisa, igelezela ekushiseni okuphansi okufukula i-expander. Ngemuva kwalokho iya ebhokisini elibandayo ukuze lipholile libe ngu- ~ 170K. Ingxenye yayo isazopholisa, futhi igeleze iye ezansi kwekholamu engezansi ngesishintshisi sokushisa. Futhi omunye umoya udonswa ekulingweni okuphansi. expander. Ngemuva kokunwetshwa, ihlukaniswe izingxenye ezimbili. Ingxenye eyodwa iya ezansi kwekholomu engezansi ukuze ilungiswe, okusele kubuyela kusishintshisi esikhulu sokushisa, bese igelezela esikhungweni somoya ngemuva kokuvuselelwa.
Ngemuva kokulungiswa okuyisisekelo kukholamu engezansi, umoya ongamanzi ne-nitrogen engaxutshiwe ingaqoqwa kukholamu engezansi. I-nitrogen ewuketshezi lwamanzi, umoya oketshezi kanye ne-nitrogen ewuketshezi emsulwa egeleza iye kukholamu engenhla ngomoya ketshezi nangoketshezi lwe-nitrogen epholile. Iyalungiswa kukholamu engenhla futhi, ngemuva kwalokho, i-oxygen engamanzi engu-99.6% yobumsulwa ingaqoqwa ezansi kwekholomu engenhla, futhi ikhishwe ebhokisini elibandayo njengomkhiqizo.
Ingxenye yengxenyenamba ye-argon kukholamu engenhla imunxwe kukholamu ye-argon engahluziwe. Kunezingxenye ezi-2 zekholomu ye-argon engahluziwe. I-reflux yengxenye yesibili ihanjiswa phezulu kweyokuqala ngepompo ye-liquid njenge-reflux. Iyalungiswa kukholamu ye-argon engahluziwe ukuthola u-98.5% Ar. 2ppm O2 argon ongahluziwe. Ngemuva kwalokho ilethwa maphakathi nekholamu elimsulwa le-argon nge-evaporator. Ngemuva kokulungiswa kukholamu ye-argon emsulwa, (99.999% Ar) liquid argon ingaqoqwa ezansi kwekholomu ye-argon emsulwa.
Imfucumfucu ye-nitrogen evela phezulu kwekholomu engenhla iphuma ebhokisini elibandayo iya kusihlanza njengomoya ozivuselelayo, ukuphumula kuya embhoshongweni wokupholisa.
I-nitrogen esuka phezulu kwekholamu yomsizi yekholomu engenhla iphuma ngaphandle kwebhokisi elibandayo njengokukhiqizwa nge-cooler kanye ne-main exchanger heat. Uma kungekho nitrogen edingekayo, khona-ke ingahanjiswa emanzini okupholisa umbhoshongo. Ukuze umthamo obandayo wombhoshongo wamanzi unganele, i-chiller idinga ukufakwa.
1: Isiguquli somoya (i-piston noma i-oyela)
3.Air ukuhlanzwa uhlelo
4: Ithangi lomoya
5: Ukuhlukaniswa kwamanzi
6: Isihlungi seMolekyuli Mole I-PLC auto）
8: Ikholomu yokulungisa
9: I-Booster turbo-expander
10: Isihloli se-Oxygen Purity
Langaphambilini Umkhiqizi onekhredithi yesitshalo-sokukhiqiza-i-oxygen-nitrogen-argon-production-plant
Olandelayo: Isitshalo se-Cryogenic oxygen sibiza isitshalo somoya-mpilo
I-Automatic Nitrogen Argon Oxygen Generating Machine Plant